Tababare Arsene Wenger oo kalsooni ku qaba in Alexis Sanchez uu sii joogi doono Arsenal – Gool FM
Tababare Arsene Wenger oo kalsooni ku qaba in Alexis Sanchez uu sii joogi doono Arsenal
Haaruun Yuusuf April 7, 2017
(London) 07 Abriil 2017 – Tababare Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday in Alexis Sanchez uu doonayo inuu sii joogo Arsenal, isla markaana uu ku rajo wayn yahay inay la gaari doonaan heshiis cusub.
Weeraryahanka xulka qaranka Chile ayaa wax ka yar 15 bilood uu kaga harsan yahay heshiiskiisa, walina ma saxiixin heshiis cusub oo ku sii hayn doona garoonka Emirates.
Wararka ay qorayeen saxaafadda ciyaaraha ka faalloota ayaa sheegayey in Chelsea laga yaabo inay ballaariso qorsheheeda ay ku doonayso inuu xiddigan kaga tago Gunners, iyadoo Sanchez qudhiisu uu horay u sheegay inuu damacsan yahay inuu baaqi ku sii ahaado London, isla markaana uu qeyb la ahaado koox guuleed ama koox guusha u saaxiib ah.
Si kastaba isagoo ka hadlayey maanta oo Isniin ah shirkiisa jaraa’id ee ka horreeya kulanka ay la leeyihiin Crystal Palace, Wenger ayaa xusufiyiinta u sheegay: “Waxaan aaminsanahay in uu sii joogi doono naadiga, waxayna ku xiran tahay in aan wada hadal la gaarno wakiilkiisa.”
“Waxaan qabaa in marka hore ciyaartoyda la ogaado in ay ku faraxsan yihiin naadiga, taa kaddib inta badan waxay noqonaysaa in heshiis la gaaro, laakiin arrinta dhaqaalahana qayb ayay ka tahay.” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Wenger.
Sanchez ayaa horumar fiican ka sameeyey Arsenal tan iyo markii uu kaga soo biiray Barcelona sanadkii 2014-kii, waxaana uu tan iyo markaa dhaliyey 64 gool 134 kulan oo uu ciyaaray, sidoo kale Sanchez ayaa dhaliyey xilli ciyaareedkan 22 gool, 18 ka mid ahna waxa uu ka dhaliyey horyaalka Premier League.
RASMI: Jurgen Klopp oo xaqiijiyey in Sadio Mane uu garoomada ka maqnaan doono inta ka harsan xilli ciyaareedkan
Wilfred Ndidi oo beeniyey wararka sheegaya inuu ku biirayo Manchester United